FBC - Daandileen Xiyyaaraa Itiyoophiyaa fi Kotidivuwaar imaltoota wal-harkaa fuudhuuf waliigalan
Daandileen Xiyyaaraa Itiyoophiyaa fi Kotidivuwaar imaltoota wal-harkaa fuudhuuf waliigalan
Finfinnee, Caamsaa 7, 2010 (FBC) Daandileen Xiyyaaraa Itiyoophiyaa fi Kootidivuwaar waliigaltee imaltoota wal-harkaa fuudhuu dandeessisu walii mallatteessan.
Waliigalteen kun hojiitti kan hiikamu ji’a keessa jirru kanaa jalqabee yoo ta’u, maamiltoonni daandii xiyyaarichaa tikeetii tokkoon akka imalan dandeessisa.
Sagantaan kunis hariiroo daandilee xiyyaaraa lamaan gidduu jiru cimsuu, humna balalii guddisuu fi maamiltoota sarara Afriikaa Lixaa fi Ameerikaa irra imalan keessuummeessuu dandeessisa.
Akka waliigaltee kanaatti imaltoonni Afriikaa Lixaa keessumaa Gaanaa - Akiraa, Beeniin - Kotoonuu, Toogoo - Loomee fi Naayijeeriyaa - Leegoosii ka’an Daandii Xiyyaaraa Kotidivuwaatriin imalanii, balalii kalattii Daandiin Xiyyaaraa Itiyoophiyaa Magaalaa Guddittii Kotidivuwaar-Abijaanii gara Ameerikaa Bulchiinsa Niwjeersii Magaalaa Niw-Yorkitti imalu fayyadamuun hidhata saffisaa uumuu danda’u.
Hoji-geggeessaan Daandii Xiyyaaraa Itiyoophiyaa Obbo Tawalde Gabramaariyaam daandilee xiyyaraa Afriikaa obbolaa waliin waliigaltee akkanaa irra qaqqabuun qaawwaa rakkoon buufata balalii Ardii Afriikaa keessaa uume furuun gabaa damichaa keessaa gahee argachuu dandeessisa jedhaniiru.
Balaliin daandiin xiyyaarichaa karaa Abijaan gara Niw-Yoorkitti balali’u haaraan kun imala magaalaa Guddoo Toogoo- Lomeedhaa gara Niw-Yoorkitti raawwatamu waliin kan wal-deggaru ta’uus Obbo Tawalden himaniiru.
Hoji-geggeessaan Daandii Xiyyaa Kotidivuwaar(Air Cote d'Ivoire) Miistar Neere Dekure gamasaaniin “Daandii Xiyyaaraa Itiyoophiyaa waliin michummaa cimsuu keenyatti gammanneerra” jedhaniiru.
Waliigalteen kun jalqabbii tumsa yeroo dheeraa daandilee xiyyaaraa lamaanii akka ta’ee fi balaliin kun imaltoonni Afriikaa Awurooppaa qaxxaamuranii gara Ameerikaa akka imalan gochuun daandilee xiyyaaraa lamaan fayyadamoo akka taasisu ibsaniiru.
Daandiin Xiyyaaraa Itiyoophiyaa buufataalee balalii Afriikaa keessaa 58, akkasumas sadarkaa idil-addunyaatti 112 ol qaba.
Oduuwwan Biroo « Daandiin Xiyyaaraa Itiyoophiyaa gara Maanchistar- Kibba Ingilaanditti tajaajila balalii dabaluuf jedha	Hojimaata guumruukitiin meeshaaleen guyyoota 60 oliif kuufaman maqfamaa jiru »